Lego Star Wars 75316 Mandalorian Starfighter ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများ
Lego Star Wars 75316 Mandalorian Starfighter ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - တောက်ပသောအသေးစားဓာတ်ပုံများ၊
17 / 06 / 2021 03 / 08 / 2021 ရော့ Paton 1484 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, 9525 Pre Vizsla ၏ Mandalorian တိုက်လေယာဉ်, ဘိုကာတန်, Bo-Katan Kryze, Gar Saxon, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Star Wars, mandalorian, သေးသေးလေး, reviews, Star Wars, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, Star Warsဖြေ, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ Mandalorian
တောက်ပသောအသေးစားပုံစံ ၃ ခုနှင့်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောဒုတိယမြောက်ပြေးလမ်းနှင့်အတူ ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter နီးပါးစုံလင်သည် Lego Star Wars အစုံ နီးပါး။
ကျွန်တော့်ဒါကသေတ္တာလေးတစ်လုံးပါ ဟုတ်တယ်၊ 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား box ကိုလေးမွတျခွအေနအေ - ၏ဂုဏ်အသရေဘို့ art ၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျောကိုဖြတ်ပြီး ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighterပေါင်စတာလင် (၅၀) ရှိသော်ငြားလည်းအနည်းငယ်သေးငယ်ပြီးအနည်းငယ်မျှသောခံစားမှုမျိုးရှိသည့်တိုင်၎င်းကိုချက်ချင်းမှတ်ချက်ပေးရန်အလွန်ဝေးကွာသောနေရာတွင်ရှိသည်။
ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့သေတ္တာထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေခဲ့တာပါ။ Bo-Katan နှင့် Gar Saxon တို့၏အသေးစားပုံစံများသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းက ၀ ယ်လိုအားရှိခဲ့သည်၊ partအတော်လေးသိသိသာသာတစ် ဦး အဖြစ်ပွဲ ဦး ထွက်သူကိုယခင်အဘို့အ icularly Lego Clone Wars ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲတွင်သူမ၏ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ကိုးနှစ်ခွဲအကြာအသေးအဖွဲဓာတ်ပုံ။
ပိုမိုကျယ်ပြန်ဘို့ Lego Star Wars စုဆောင်းသူများနှင့် Clone Wars ပရိတ်သတ်များ၊ ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ထို့အပြင် Mandalorian Starfighter (Gauntlet ဟုလည်းလူသိများသော) မော်ဒယ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပိုင်ဆိုင်ရန်ဒုတိယအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ Brick Fanatics, သင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် 9525 Pre Vizsla ၏ Mandalorian တိုက်လေယာဉ်ကို 2012 ခုနှစ်တွင်ရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အခါကတည်းကကတည်းကအလွန်စျေးကြီးပြီးတဲ့နောက်စျေးကွက်ထဲမှကောက်တက်ဝံ့ကြဘူး။
အချို့အတော်လေးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်၏နွေရာသီလှိုင်း၌တည်၏ Lego Star Wars အစုံ, ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter အများဆုံးမျှော်လင့်သယ်ဆောင် - ကကယ်နှုတ်တော်မူပါသလား
theme: Lego Star Wars အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ဖြန့်ချိ: သြဂုတ်လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 49.99 / $ 59.99 / € 59.99 အပိုင်းပိုင်း: 544 အသေးစားပုံများ: 3
အထက်ပါမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန် - အရှိဆုံး p အတွက်ဖြစ်သည်art။ စဉ်တွင် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego Star Wars အဓိကအားဖြင့်သင်္ဘောသည်မည်မျှထူးခြားကြောင်းနှင့်၎င်းသည်မည်မျှထူးခြားသည်ကိုတန်းစီဇယား Lego ပုံစံ။
၎င်းသည်သင်ကမျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ထားသည့်ပမာဏထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည် (ဖြစ်နိုင်သည်မှာ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၏ ၉၅၂၅ ထက်တိုသောအက္ခရာ ၅ လုံးခန့်နှင့်ပါးလွှာသောခြောက်ချပ်မျှသာရှိသည်)၊ သို့သော်အသေးစိတ်နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် \_ t ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter မဟုတ်ပါသင်္ဘောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူထုပ်ပိုးကြောင်းဝေး, ထိုနဂါးငွေ့တန်းကနေအမှန်တကယ်တ ဦး တည်း -of-a- ကြင်နာသောသင်္ဘောပတ်လည်မှာအားလုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ပျော်စရာဖမ်းယူ။
ပိုသေးငယ်တဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်လာမယ့်သေးပိုကြီးတဲ့အပိုင်းအစရေတွက်ရှိခြင်းန်းကျင်သိချင်စိတ်ကျော်လွန်ပြီး, လွန်ခဲ့သောကိုးနှစ်ကနေ၎င်း၏ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဘို့ပို။ သို့မဟုတ်လျော့နည်းမလိုအပ်သောများအတွက် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, ဒီဇိုင်း, technique ကို, p အတွက်တိုးတက်မှုပေးထားartထိုအချိန်ကတည်းကရရှိနိုင်မှုနှင့်အရောင်ရွေးချယ်မှုများနှင့်ထိုအရာအားလုံးမည်သို့ဤနေရာတွင်ပါဝင်သည်။
၇၅၃၁၆ သည်မန်ဒယ်ရီယန်တိုက်လေယာဉ်၏အတုအယောင်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီးအတောင်ပံများနှင့်ထောင့်များကိုလှည့်ခြင်းများအပြင်ဆလင်ဒါပုံစံအလယ်ပိုင်းပုံကြမ်းကိုပုံသွင်းသည့်ချွန်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုကျွမ်းကျင်စွာပြန်လည်ဖန်တီးထားသည်။ အဓိကအားဖြင့်သံမဏိပြားများနှင့်အုတ်ကြွပြားများဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အတော်လေးပါးလွှာသည် Lego အကောင်းဆုံး, မကြာသေးမီကမဆိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Lego X- အတောင်ပံ, ဒါပေမယ့်အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်ကြံ့ခိုင်သောတ။
အစုအဝေးကိုကျွမ်းကျင်စွာပုံတူကူးယူရန်လိုအပ်သောရွေ့လျားမှုပမာဏကိုစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည် - အလှည့်ဗဟိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်အထက်သို့ခေါက်တောင်ပံများဖြစ်သည်။ လေယာဉ်ပြေးဆွဲမှုပုံစံတွင်ကြယ်ပွင့်တိုက်လေယာဉ်သည် Clone Wars တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းတူညီသောမောင်းနှင်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
သို့သော်…ပုံစံမှာမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိတယ်။ ဆင်းသက်မှုပုံစံမှာသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဟန်ချက်မညီပါ။ Clone Wars နှင့် Mandalorian နှစ်မျိုးလုံး၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုအရ Gauntlet သည်၎င်း၏တောင်ပံများနှင့်အတောင်ပံ၏နောက်ကျောဘက်တွင်ဖြောင့်မတ်စွာထိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ သင်္ဘော၏အလယ်သို့ရှေ့သို့ရှည်လျားစွာရှေ့သို့ညွှန်ပြသည်။ ဗဟိုထောက်ပံရပ်တစ်ခု (သို့) ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလုံးဝအဆက်အသွယ်မရှိ (အနည်းဆုံးမင်ဒိုလာရီယန်ကိုအတိုချုပ်တွေ့မြင်ရနိုင်လျှင်) ဤအနေအထားတွင်သင်္ဘောသည်ဖြောင့်မတ်စွာထိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်အရာတွင်ထောက်ခံရပ်တည်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဆွဲငင်အားကြောင့်မော်ဒယ်သည်ရှေ့သို့ကျဆင်းသွားသည်။ တောင်ပံများနှင့်အားလုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့သုံးဆစစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတာသိပ်ထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ငါတို့က set ကိုမဆောက်ရသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင်ကတရားဝင်ရဲ့ 'လူနေမှုပုံစံစတဲ့' ပုံရိပ်တွေကိုအနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆိုပါ LEGO.com စာရင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် သိပ်ပြီးပါးနပ်စွာထောင့်ချိုးဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှတဆင့်မြင်သာစွာမြင်သာစွာကွယ်ဝှက်ထားသောပြသနာပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအတရားဝင် box ထဲမှာ art? မရှင်းနိုင်အောင်ခုတ်ပစ်လိုက်ပြီ cheeky Legoအလွန် cheeky ။
အတွင်းသင်္ဘော၏ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ ချစ်ရန်အများကြီးရှိပါတယ် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, ဒါပေမယ့်အထောက်အပံ့ရပ်တည်ချက် (အမှန်တကယ် On-screen ကိုသင်္ဘောတိကျမှန်ကန်မှုရှိမရှိ) ၏မရှိခြင်းကိုနောက်ဆုံးမော်ဒယ်ပတ်ပတ်လည်အတွေ့အကြုံကိုတစ်ဝက်အနည်းငယ်အတန်ငယ်သည်ဆိုလိုသည်။ စိတ်ရှုပ်စရာ - ဘာကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရတာအတော်လေးလွယ်ကူတာလဲ ပြင်ဆင်ရတာဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲ အဲဒါတကယ်ပါ. အနည်းငယ်ပန်းကန်အဖြောင့်ရုံဒဏ်ငွေအဆင့်ကိုအောက်မှာ inverted သပ်ထပ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter သင်ဟာအီးအနည်းငယ်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်xtra Lego အဘို့အဖြည့်အပိုင်းပိုင်း, အဘို့အထိုက်တန်သော display ကို mode ကိုဖန်တီးရန်။
၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ယုံကြည်စိတ်ချရတယ် Lego ၎င်းကိုတည်ဆောက်သည့်မော်ဒယ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသော်လည်းအသေးစိတ်ထည့်သွင်းထားသောအသေးစားဓာတ်ပုံများ၏သုံးပုံနှင့်ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာအတွက်သဘာဝကျလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်စတင်ရန်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး တည်းသာရှိပြီး Bo-Katan ဖြစ်သည်။ Clone Wars တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက်နောက်ဆုံးတွင်သူမအပြည့်ရှိခဲ့သည် Lego အလွန်သေးငယ်သောဘုန်းအသရေဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထိုက်တန်စွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရှုထောင့်တိုင်းမှာ၊ ဒီဟာငါတို့လိုချင်တဲ့အသေးငယ်ဆုံးပုံစံဖြစ်တယ်၊
အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့သံခမောက်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီဇိုင်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစဉ်မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကသူမရဲ့ကိုယ်ထည်နဲ့ခြေထောက်တွေကနေတစ်ဆင့်အရာအားလုံးကိုအတူတကွချည်နှောင်ပြီးအရာအားလုံးကိုအတူတကွချည်နှောင်ထားပါတယ် Lego Star Wars minifigure စုဆောင်းခြင်း။
ဘိုကာတန်သည်ယေဘူယျအားဖြင့် Mandalorian Loyalist ပါ ၀ င်သည်။ များစွာသောသူတို့အတွက်အစပိုင်းတွင်လျစ်လျူရှုခံရမည်ဖြစ်သော်လည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်တော့ စုပေါင်း၍ ရေရှည်ပြသနိုင်သည်။ သူများသည်သံခမောက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်သော်လည်းအပြာရောင်ဆေးသုတ်ခြင်း၏ခြစ်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကိုယ်ထည်နှင့်ခြေထောက်များမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်၍ အမည်မသိဇာတ်ကောင်ကိုသင့်တော်စွာစစ်ဆင်နွှဲနေသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
ဤသေးငယ်သောရုပ်ပုံများသည် Clone Wars နှင့် Mandalorian line များတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ Lego Star Wars အဖွဲ့။
တတိယအသေးအဖွဲသည်အခြားဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများကိုစုဆောင်းမှုတွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ Maul loyalist နှင့်အနာဂတ် Imperial Super Commando Gar Saxon တို့၏အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင် Mandalorian သံချပ်ကာတပ်ဆင်ထားသောထိုချိုများတွင်ပါဝင်သောထူးခြားစွာပုံသွင်းထားသည့်သံခမောက်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ Bo-Katan ၏ဒီဇိုင်းကဲ့သို့ Gar Saxon's သည်ထူးခြားသောပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးပုံပန်းသဏ္youာန်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သတိပြုမိနိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သူ၏သေးငယ်သောပုံသဏ္faceာန်သည်လည်းစုံလင်သောဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။
အစဉ်အဆက်ပါလျှင်တစ် ဦး အတွက်လာ minifigures ၏အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောသုံးရှိခဲ့သည် Lego Star Wars ဒီဟာကသုံး၊
ပေါင် ၄၉.၉၉ / ၅၉.၉၉ / ယူရို ၅၉.၉၉ အတွက် ၅၄၄ ယူနစ်ကိုကောက်ယူခြင်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်မျှမျှတတရှိသည် Lego အစုံ သူတို့အား 544 အပိုင်းပိုင်းတည်ဆောက်သော ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter နှင့်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းသုံးခုပါဝင်သည် Lego Star Wars မကြာသေးမီကလှိုင်းတံပိုး၏အသေးအဖွဲအလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကိုတွေ့ရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မော်ဒယ်ကကောင်းမွန်စွာပြသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းဈေးနှုန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာအားလုံးအတွက်၎င်းသည်၎င်း၏အဖွင့်လများအတွင်းစတော့ဈေးကွက်တွင်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
အဆိုပါ Lego တရားဝင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတွင် Group သည်အနည်းငယ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းလွဲစေခဲ့သည် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighterတကယ်တော့သူမလုပ်နိုင်တာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်လို့အကြံပြုခြင်း၊ ဒီအရာတွေကြားထဲမှာ - ဖြောင့်မတ်စွာရပ်နေခြင်း - အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုလိုထင်ရပါတယ်။
ထိုသို့ပြောရလျှင်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံကျသောပြissueနာကိုလျစ်လျူရှုထားခြင်းသာမဟုတ်ဘဲ၊ solvable ပြproblemနာ အနည်းငယ်နှင့် Lego ရိုးရှင်းစွာပါ ၀ င်သည့်ပုံစံနှင့်အသေးစားပုံစံသုံးခုသည်မည်မျှစုံလင်စွာပါဝင်နိုင်သည်မှာများစွာသောသူများအတွက်ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောဆန္ဒတစ်ခုထက်မကကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် Lego Star Wars ပန်ကာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမ ဦး ဆုံး Bo-Katan နှင့် Gar Saxon အသေးစားဓာတ်ပုံများနှင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းပထမဆုံး Mandalorian Gauntlet အားလုံးသည်ဤမျှကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်၌ဤတစ်ခုတည်းသောနေရာတွင်လာသည်။ အကယ်၍ မော်ဒယ်သည်ထပ်မံတည်ဆောက်စရာမလိုဘဲသူ့ဟာသူရပ်တည်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုအကြောင်းပြောလိမ့်မည် Lego Star Wars မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းထွက်လာကြပြီစုံ။ လက်ရှိအနေအထားအရ၎င်းသည်မည်သည့်စုဆောင်းမှုတွင်မဆိုဂုဏ်ယူထိုက်သည်ထက်ပိုမိုသောအဆင့်အတန်းအောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထောက်ခံမှုရပ်တည်ချက်ကိုထည့်သွင်းဖို့သာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်စုဆောင်းခြင်း တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Star Wars 75316 Mandalorian Starfighter လား။
၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ပြီးစီးရန်တစ်နာရီအောက်သာလိုသော်လည်းအတောင်ပံအတွင်းရှိအပြာရင့်ရောင်သောဒြပ်စင်များကိုသူတို့အလျင်အမြန်မပို့ဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဂရုပြုပါ။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Star Wars 75316 Mandalorian Starfighter လား။
544 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter၎င်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၏ 151 Pre Vizsla ၏ Mandalorian Fighter ထက် ၁၅၁ ပိုကြီးသည့်ပမာဏဖြစ်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Star Wars 75316 Mandalorian Starfighter လား။
တောင်ပံမှအစမှအုပျစု၏နောက်ကျောအထိ၊ ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ၃၃ စင်တီမီတာအရှည်ရှိပြီးလေယာဉ်ကိုယ်ထည်သည် ၆.၅ စင်တီမီတာရှိသည်။ Gauntlet သည်မြေပြင်မှကြမ်းပြင်မှတောင်ပံသို့အမြင့်အထိ ၃၀ စင်တီမီတာရှည်သည်။ ရှေ့မှ ၂၇ စင်တီမီတာရှည်သောကိုယ်ထည်၏နောက်ကျောအထိဖြစ်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Star Wars 75316 Mandalorian Starfighter ကုန်ကျသလား
၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter ယူကေတွင်ပေါင် ၄၉.၉၉၊ ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ နှင့်အီးယူရှိယူရို ၅၉.၉၉ မှစျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ထားသည်။ ၎င်းမှာယူအက်စ်အတွက်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉၊ ဒေါ်လာ ၅၉.၉၉ နှင့်ယူအက်စ်တွင် ၅၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ။
← LEGO VIP အစီအစဉ်သည်ကုမ္ပဏီ၏အရွယ်ရောက်စျေးကွက်၏အရိပ်အမြွက်ကိုဖော်ပြသည်
LEGO အတွက်တရားဝင်ပုံများ Star Wars ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter သည်အလွန်အမင်းလမ်းလွဲစေသည် →